Abiyyi Ahmed ! Gaggeessitoota Humna tikaa fi nageenyaa iccitiin walitti qabuun filannoo waliin wal qabatee qajeelfama haaraa dabarsee jira.Akka kanaan: – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAbiyyi Ahmed ! Gaggeessitoota Humna tikaa fi nageenyaa iccitiin walitti qabuun filannoo waliin wal qabatee qajeelfama haaraa dabarsee jira.Akka kanaan:
Abiyyi Ahmed ! Gaggeessitoota Humna tikaa fi nageenyaa iccitiin walitti qabuun filannoo waliin wal qabatee qajeelfama haaraa dabarsee jira.Akka kanaan:
#Abiyyi_Ahmed gaggeessitoota Humna tikaa fi nageenyaa iccitiin walitti qabuun filannoo waliin wal qabatee qajeelfama haaraa dabarsee jira.Akka kanaan:
1) Namoota PPn filannoo akka hin injifanneef gufuu ta’uu malan hundaa funaananii mana hidhaatti akka naqan
2)Godina hundaa keessatti warra PP jibbuu fi jabeessee mormu adda baafatanii bakka bakkatti rashanuu
3)Namoota warra bosonaa waliin hidhata qabu jedhamanii shakkaman mana hidhaa geessuu odoo hin taane ummatni akka irraa baratu rashanuu
4)Filannoo booda ( Fulbaana keessa) namoota baay’ee mana hidhaa keessaa waan yaafnuuf namoota mootummaa morman “kumaatamaan hidhuu” akka hin sodaanne.
Buufataaleen poolisaa yoo guutamanis kaampii waraanaa hundaatti dhimma akka bahamu qajeelfamni kennamee jira.
Lola daangaa Itoophiyaa fi suudaan gidduutti banamee deemaa jiru waliigaltee Itoophiyaa Jaarsummaa akka lolli dhaabbate dubbii xumuramuuf gaafatte suudaan kufaa gootee jirti. Eertiraa dhimma Itoophiyaafi suudaan gidduu galuun Waraana ishee gara suudaan galchaa akka jirtu erga ibsitee booda Eertiraan dhimma ishee hin galchine keessa akka hin galle akeekkachiistee jirti suudaan. Dubbiin suudaan duuba Egypt jira jadhamus soba ta’uu beeksistee jirti. Lafa keenya hanga waliigaltee bara 1902 menelik II fi ko. UK walii galtee mallatteessine turreetti hin dabrinu lafa keenya ammoo ni deeffanna jachuun eejjannoo ishee beeksisitee jirti.
Jarri PPs menelik II isin goota jattanii Masaraa 4kiloo keessatti warqiin siidaa isaa ijaartantu lafatti akka kan suudaani jadhee mallatteesse abbaa keessanitti obsaa…
Amaarri waan Menelik II isaanii Mallatteesse Amiiiin jadhe fudhachuun lafa nama deebisuu qaba….
Godina Buunnoo #Beddellee aanaa #Cawwaaqaa ganda Odaa Kanniisaa jedhamutti Guraandhala 21/2021 Waraanni Bilisummaa Oromoo tarkaanfii weerartoota Sirna PP irratti fudhateen loltoota diinaa kana adabee jira.Kanneen kaan baqaan of duuba deebi’uun kotte na baasi jettee ganda mandara Shan jedhamu seenteetti.
Qeerroo fi hawaasni naannoo kanaa kanneen bilisummaatti amantanii fi gabrummaa jala jiraachuu beektanii fi hubattan akkuma godinaalee Oromiyaa biraa WBO cina dhaabbachuun eeruu diinaa kana qaama barbaachisuuf laachuun dirqama Oromummaa keessanii akka baatan gadi jabeessinee isinii dhaamna.
Oromummaa tokko qabna.
WBO’n tarkaanfii diinarratti fudhatu itti fufuun hanga Sirni bututaan Bilxiginnaa jedhamu kan Oromoo fi Oromummaa dhabamsiisuuf xiyyeeffate kun hundeen buqqa’ee Oromiyaan Walabaa ijaaramtutti tarkaanfiin kan duubatti hin deebine ta’uu firris diinnis hubachuu akka qabu WBO’n gadjabeessee hubachiisa.
Alagaan Jawaar beekumsa isaatiif jibbiti; Oromoon angoo nurraa fudhataaf jibbiti!
Suuraa ha dubaatu.
Wal qixxummaan Sabootaa, qixa fayyadamummaan qabeenya biyyattii akka mirkanaahu fi Dimokiraasiin dhugaa akka jiraatuuf nama Ija tokkoon rafee qabsaa’edha.
Jawaar Rakkoo gandummaa fi Amantiin qoqqooduu hin qabu. Dhufaatiin isaas jireenyi isaas maatii Amantii garagaraa hordofaniidhaani.
Egaa Hayyuu fi goota Mahaandisa qabsoo kana kan Faarfattuun Sirna Naafxanyaa hiitee dararaa jirtu.
Biyya kanaaf kan barate, beekaanifi Kan dhugaan bulu gatii hin qabu. Beekaan buluu biyyi hin barre, Afaan qawweef dursa laattee, qabsoo sabaas hatteetu, hattuun bulti! Nama aarsa!
Garuu Guyyaan Hayyuun kun Saba isaa fuuldura dhaabbatee “Qeerroo Jirtuu?” Jedhu inuma dhufa!
“የቆሙትን ጨርሰናል” ጠ/ሚንስትሩ፣ በትግራይ ተመራቂ ተማሪዎች ተገደሉ፣”ቀሚስ አለበሱኝ” ታዬ ደንደኣ፣ አምባሳደሩ ሞቱ፣ ኤርትራውያን በአዲስአበባ| EF
Statement by Macha Tulama-USA Board of Directors on the Alarming Situation of Oromo Political Prisoners Who Are on a Hunger Strike
Ejjannoon ABO Fi KFO Fala Biyyoolessaa Furmaata Rakkoo Siyaasaa Biyya Mootummaa Seerawaa Hin Qabne Keessatti Baay’ee Murteessaadha.